Momba anay - Zhoushan Tanso Plastics Machinery Co., Ltd.
Iza ary isika
ZhouShan Tanso Plastika Plastika Co, Ltd dia mpanamboatra matihanina fitaovana fampiasa amin'ny indostria naorina tamin'ny 1990
Manamboatra famolavolana tsindrona, fitrandrahana ary fingotra misy vokatra kalitao toy ny hodi-doko, barika ary bobongolo. Mampanantena izahay fa hanokana hatrany ny fotoana sy ny maha matihanina antsika amin'ny fampandrosoana ny vokatra avy ka mahatonga ny lanjany lehibe ho an'ny mpanjifa.
Nahazo ny fankasitrahana sy fankasitrahana avy amin'ny mpanjifantsika rehetra i TANSO noho ny serivisy aorian'ny fivarotana. Amin'ny TANSO, tsy ny kalitaon'ny vokarintsika fotsiny no ifantohantsika fa ny fampiasana araka ny tokony ho izy. Ny ekipa mpiasan'ny mpanjifa any an-trano dia manara-maso miaraka aminao mandritra ny fotoana fohy hiatrehana ny masinina dia ampiasaina tsara mba hampitomboana ny lanjan'ny vokatra sy haharetanany ny fiainany. Rehefa misy ny olana ara-teknika, amin'ny fotoana ara-potoana, ny ekipanay dia hampianatra aminao ny hanome izay ilaina amin'ny fitifirana olana.
1. Torohevitra teknika, araka ny vokatra samy hafa, hitanay aminao ny vahaolana mety indrindra
2. manome fampidirana matihanina amin'ny safidy ny fitaovana
3. olana amin'ny fitifirana sy ny tanjona kendrena mba hiantohana ny valiny ambony indrindra
Tanso no manana ny asa fanamboarana efa mandroso sy ny fanodinana mandritra ny fotoana farany, mba hahafahana mameno ny fepetra ara-teknika tsirairay amin'ny vokatra tsirairay. Ny trano fonenantsika dia voamarina amin'ny ISO9002
NY FIVORIANA ANKIZY